"Dia nitodika nijery azy Jehôvah ka nanao taminy hoe: Mandehana amin'izao herinao izao, ka vonjeo ny Isiraely amin'ny tanan'ny Midiana; tsy efa naniraka anao va Aho? Fa hoy izy taminy: Indrisy, Tompo o, hataoko ahoana no famonjy ny Isiraely? He! Ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izaho no kely indrindra eo amin'ny ankohonan'ny raiko. Dia hoy Jehôvah taminy: Homba anao tokoa Aho, ka hamely ny Midiana toy ny famely olona iray monja hianao." Mpits. 6:14-16.
Ireo zava-mahagaga rehetra izay notanterahin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka dia natao tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra indrindra avokoa.
Rehefa manolo-tena tanteraka Aminy ny vahoakan'Andriamanitra, dia hampiasainy mba hitarika ny asany eto an-tany izy ireo. Kanefa aoka hotsaroantsika mandrakariva fa na inona inona fahombiazana mety hanaraka antsika, ny voninahitra sy ny haja dia an'Andriamanitra hatrany, satria fanomezana avy Aminy ny fahaizana sy ny hery tsirairay entintsika miasa.
Hosedrain'Andriamanitra hatrany amin'ny lalina indrindra ny finoana sy ny herim-pon'ireo izay nanankinany andraikitra eo amin'ny asany. Matetika no tsy hahomby ka ho voasakana ny fisehoana eny ivelany. Na dia nanome toky ny fanampiany hatrany hatrany aza Andriamanitra, dia mbola saika mivembena foana ny finoana. Ny "Izao no lazain'i Jehôvah" no tsy maintsy hianteherantsika mafy, na inona na inona mety ho fihevitry ny olombelona na koa zavatra tsy hain'ny olona miharihary.
Natao hampianatra antsika ny leson'ny fahatsorana sy finoana ny fanandraman'i Gideona sy ny miaramilany. Tsy nitana toerana nisongadina teo amin'ny Isiraely ny mpitarika izay nofidin'Andriamanitra. Tsy mpanapaka, na Levita, na mpisorona izy. Nihevitra ny tenany ho ny kely indrindra eo amin'ny ankohonan'ny rainy aza izy. Tsy ho nisafidy azy mihitsy ny fahendren'olombelona, fa Andriamanitra kosa nahita tao amin'i Gideona lehilahy feno fahitsiana sy herim-po. Tsy natoky ny tenany izy, hany ka vonona ny hihaino ny fampi anaran'Andriamanitra sy hanatanteraka ny fikasany.
Tsy miankina amin'ny olona manana toerana ambony, na avara-pianarana, na manana fahalalana mivelatra ny Tompo. Matetika no feno avonavona sy matoky tena ny olona tahaka izany. Mihevitra ny tenany ho afaka mamolavola sy manatanteraka drafitra nefa tsy misy torohevitra avy amin'Andriamanitra izy ireo. Mampisaraka ny tenany amin'ilay Tena Voaloboka izy ireo, hany ka lasa maina sy tsy mamokatra, tahaka ny sampana malazo.
Hahamenatra ny olona mpirehareha Andriamanitra. Homeny fahombiazana ny ezaka marefo sy ny fomba tsy manome toky indrindra rehefa Izy no manendry izany, ary raha toa ka iantsorohana amim-panetren-tena sy amim-pitokiana izany. - ST, 30 Jona 1881.